Goretti Irisarri na Jose Gil Romero. Ajụjụ ọnụ ndị dere La traductora | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 11/09/2021 12:00 | Emelitere ka 12/09/2021 09:18 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Akwụkwọ
Profaịlụ Twitter ndị ode akwụkwọ.
Goretti Irisarri na Jose Gil Romero Ha abụrụla di na nwunye okike ihe karịrị afọ iri abụọ wee bipụta aha dị ka trilogy Ndị niile nwụrụ anwụ (mere) Kpakpando ndị na -agbapụ agbapụ na -adaba, Usoro nke ihe nzuzo na obodo agbachiri), dị ka ọmụmaatụ. Onye ntụgharị okwu Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọhụụ ya wee pụta n'ọnwa a. Ana m ekele gị nke ukwuu oge gị na obiọma ịrara m nye ajụjụ ọnụ a aka abụọ na -egosi na ha na -eme nke ọma.
Goretti Irisarri na Jose Gil Romero - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Onye ntụgharị okwu bụ akwụkwọ ọhụrụ gị. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
JOSE GIL ROMERO: Akwụkwọ akụkọ a na -akọ kedu ihe gaara eme na nkwụsị nkeji asatọ nke ya na Ụgbọ oloko Franco rutere nzukọ na hitler na Hendaye. Site n'ezi ihe ahụ anyị na -azụlite a akụkọ ịhụnanya na enweghị obi abụọ, na -ese onye ntụgharị okwu, nwanyị nke na -enweghị obi ike, onye chọrọ naanị ibi n'udo, yana onye na -etinye nkata nledo.
GORETTI IRISARRI: Anyị nwere mmasị na echiche nke itinye onye na -eme ihe nkiri na -ebi ọtụtụ aghụghọ n'ụgbọ okporo ígwè ahụ na -agba ọsọ, ọ bụ ihe onyonyo ma anyị chere maka ya ozugbo Hitchcock, na fim ndị ahụ ị na -amalite ịhụ na ha anaghị ahapụ gị.
AL: Ị nwere ike ịlaghachi n'akwụkwọ mbụ ahụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
GI: N'okwu m, amalitere m na Tolkien, Hobbit, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụ akwụkwọ mbụ m chetara. Ọ dị ka ịchọta ọgwụ ma akwụsịghị m.
JGR: Gụọ ma eleghị anya ụfọdụ akwụkwọ Ise, nke nwanne m nwanyị ga -enwe na shelf. Mana obi abụọ adịghị ya ihe akara nwata m, m ga -asị na ndụ m, bụ Ụlọ, nke Carlos Giménez mgbe anyị nwere ozi ahụ. Ma dee ... n'ezie edemede nke otu n'ime ihe ọchị ndị ahụ m sere mgbe m dị afọ iri na ụma, nke bụ akụkọ akụkọ egwu na nnukwu anụ mmiri, nke mmetụta dị ukwuu na ya ọbịa site James Cameron na mmetụta pụrụiche nke ihe nkiri David Cronenberg.
AL: Onye isi edemede? Ị nwere ike họrọ ihe karịrị otu na oge niile.
JGR: A na -agụkarị Gore karịa m (ọchị). Mana enwere ọtụtụ ... García Márquez na Galdós, Horacio Quiroga na Stefan alaka ụlọ ọrụ, Perez Reverte na Eduardo Mendoza, Bukowski...
GI: Aga m agbaji ube maka ụmụ agbọghọ ahụ. Aga m etinye aka m n'ọkụ maka ihe ọ bụla sitere na Sei Shonagon, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Susan Sontag ma ọ bụ sọfụ kacha ama ama, Agatha Christie...
GI: N'eziokwu, Agatha bụ sọfụfụ sọfụfụEnwere ụfọdụ ọmarịcha foto ya na bọọdụ na -ejide ebili mmiri.
JGR: Ọ ga -amasị m izute ọbịa Kedu ihe ị na-achọ Agba.
GI: Kedu ezigbo ajụjụ! Ọ ga -amasị m kee na dị nnọọ mgbagwoju anya ọchịchị nke Ọzọ gbagọrọ agbagọ. Na maka ịmara ... kaptin nemo, nakwa na ọ kpọọrọ m gaa obere njem ala ala Vigo estuary, nke o doro anya na ọ dị.
GI: Tupu ịpịnye ọchụchọ maka onyonyo. Ka m banye ebe ọhụrụ ọ dị m mkpa ịhụ onyonyo tinye m n'ọnọdụ, echiche ejiji na -atọ ọchị, ụfọdụ ihu.
JGR: Ịgụ ihe, ọ nweghị ihe na -abata m n'uche ugbu a ... ma lee, abụ m onye mmachi! Ee, lee: M na -azụta ọtụtụ aka nke abụọ, Ọ dị mma, enweghị m ike ịnagide ịchọta akara onye ọzọ n'akwụkwọ. Anya m na -aga na paragraf ndị ahụ nke ọzọ nwere mmasị na ọ na -adọpụ uche m, ọ na -adọpụ uche m. Ekwuru m, onye maniac (na -achị ọchị).
AL: Nke ahụ masịrị ebe na oge ime ya?
JGR: Ịgụ, obi abụọ adịghị ya tupu ụran'ime cama.
GI: Enwere m ụtọ gbagọrọ agbagọ maka ịgụ ihe ebe oke mkpọtụ dị, dị ka ụzọ ụgbọ oloko. Ọ masịrị m itinye uche ọ na -amanye m, mikpuru onwe m karịa.
AL: Enwere ụdị egwu ndị ọzọ na -amasị gị?
GI: Enwere m mmasị na ihe a na -akpọ literatura nke ụdị, maka ịgụ na ide ihe. Ide ya dị ukwuu na enwere iwu na -egbochi gị, njedebe dịka ndị na -akọwa ụdị. Creatively ọ na -arụ ọrụ ka mma. Enwere akwụkwọ akụkọ nke Lars von Trier, Ọnọdụ ise, nke na -akọwa ya nke ọma: Von Trier na -agbagha onye dere obere ihe nkiri ka ọ gbaa ise remakes nke mkpụmkpụ ya, na oge ọ bụla ọ ga -etinye ọnọdụ siri ike, nke agaghị ekwe omume. Mana ihe na -atụ egwu n'ezie bụ mgbe Lars Von Trier gwara ya na oge a ọ naghị etinye ọnọdụ ọ bụla na ya: ọ na -ahapụ onye edemede dara ogbenye n'enweghị nchekwa n'ihu abyss, nke nnwere onwe zuru oke.
JGR: Ọtụtụ ụdị dị iche iche, mana… ee, ihe omume ọzọ: Ọ na -esiri m ike ịgụ akwụkwọ na -abụghị Spanish. Ọ na -eme m ụjọ na -eche na ntụgharị asụsụ m na -agụ agaghị ezu oke na nke a ga -emebi ọgụgụ m. Ọ bụ echiche na -adịghị ahụkebe, amaara m, enwekwara m ọ funụ nke ukwuu ịkọwa ya na agwa sitere na ya Onye ntụgharị okwu, nke na -ekwu ihe dịka "Anaghị m atụkwasị anya ntụgharị asụsụ m ga -achọta."
AL: Gịnị ka ị na -agụ ugbu a? Na ide?
GI: Ana m agụ Ụzọ mmetụta uche nke Madrid, na Kareree, La Felguera bipụtaghachiri ya. Emilio Carrere, onye edemede nke Ụlọ elu hunchbacks asaa, Ọ bụ agwa pụrụ iche, onye na -ede uri na onye na -ede uri bohemian, onye agha ahụ nabatara ọchịchị Franco mgbe agha ahụ gasịrị. Ọ bụ otu n'ime ndị edemede nke echiche ya adịghị mfe ịkọwa. Gbanye Onye ntụgharị okwu ọ na -apụta na -agụ uri na redio, ebe ọ ma ama. Uri a bụ otuto nye ndị Nazi na -abanye Paris, Paris n'okpuru swastika.
Anyị nwere mmasị na -egosi ebe ahụ na -ekpo ọkụ nke oge ahụ, mgbe ihe niile na -edochaghị anya ugbu a na enwere ndị ọgụgụ isi nwere mmasị na Ọchịchị Nazi. Dịka ọmụmaatụ, enwere nnukwu ihe ngosi na Círculo de Bellas Artes n'akwụkwọ German, nke dịkwa na akwụkwọ akụkọ. Ka o sina dị, enwere foto ndị ahụ nwere nnukwu swastikas na -akwụgide na mgbidi gburugburu ... Akụkọ bụ ihe ọ bụ.
JGR: Ana m agụ Dike nwere nnuku ihunke Campbell dere. Mmegharị ahụ na -amasị m n'ezie. Agụrụ m ọtụtụ ihe gbasara usoro akụkọ na ihe dị otu a, ka m hụ ma m mụta ntakịrị (ịchị ọchị)
Banyere ihe anyị na -ede, anyị ka dechara akwụkwọ akụkọ na afọ juru anyị afọ. Enwere olile anya na anyị nwere ike nye akụkọ gbasara mbipụta ya, n'oge adịghị anya.
JGR: Ọ dị mma, m ga -ekwu karịa ka ọ dị na mbụ, m ga -ekwukwa nke ka njọ karịa mgbe ọ bụla. Echere m na ebipụtala ya ọtụtụ, ọtụtụ, mana n'ọnọdụ draconian: Oge nrigbu dị mkpụmkpụ ma asọmpi siri ike. Enwere ọtụtụ ndị ezigbo mmadụ na -ede akwụkwọ dị ukwuu na onye na -agụ ya enweghị oge na ikike ịhọrọ ha. Ọtụtụ ndị omekome na -apụ n'anya n'ụzọ ma ọ bụdị emeghị ya. Ọ dịkwa egwu iche n'echiche mmadụ ole nwere nkà nọ ebe ahụ, mefuru.
GI: Echekwara m ụzọ ọhụrụ maka akụkọ ọdịyo ọdịyo na -ebu oke ibu, ọkachasị usoro onyonyo, nke ghọrọ akwụkwọ ọgụgụ ma na -elezikwu anya maka mmepe nke ndị na -agụ akụkọ ma ọ bụ nyocha akụkọ. Na ha bụ a asọmpi siri ike, n'ihi na oge ị na -etinye na -ekiri isi na isi nke usoro ị naghị etinye oge n'ịgụ ihe.
JGR: Oge ndị a siri ike. E nwere ọtụtụ ndị na -ata ahụhụ ma ọ bụ ndị tara ahụhụ. PN'akụkụ nke anyị, anyị nwere ike weta ụfọdụ ahụ efe, ntakịrị ụzọ pụọ na ahụhụ ahụ. A na -ekwu ụfọdụ n'ime ya n'ime Onye ntụgharị okwu nakwa: site na ụzọ nzọpụta nke akwụkwọ chere maka ndị mmadụ na, n'echiche ahụ, akwụkwọ akụkọ bụ ụtụ maka akwụkwọ. Enwere olile anya, ọbụlagodi obere oge, ndị na -agụ akwụkwọ anyị ga -alarịrị ekele anyị. Nke ahụ ga -ama mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Goretti Irisarri na Jose Gil Romero. Ajụjụ ọnụ ndị dere La traductora
José Javier Abasolo. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Original Version